Ungayifaka kanjani futhi Uyisuse kanjani Uhlaka lwe-3D - uLucidPix
Ungayifaka kanjani futhi Uyisuse kanjani Uhlaka lwe-3D eLucidPix
Sibe nemibuzo yakamuva ngokuzungeza isithombe sakho se-3D ngaphandle kohlaka lwe-3D, ngakho-ke, ukuphendula sikusiza ukuba uzulazule kangcono uhlelo lokusebenza nalokhu okuthunyelwe kwebhulogi!
Vula uhlelo lokusebenza lweLucidPix bese ukhetha isithonjana seKhamera. Lapha, uzoqondiswa ngokuzenzakalelayo ekhasini le- “3D Frame”. Lokhu kukukhombisa ngokushesha ama-Bubble we-3D njengohlaka lwesibonelo. Ngaphansi kwesikrini, ngenhla kwenkinobho yokuthwebula, kunezindlela ezintathu ongazikhetha kuzo ukudala ubuciko bakho be-3D: Uhlaka lwe-3D, Ubuso be-3D, ne-3D Photo. Ungapheqa ngalezi zici ezintathu bese ukhetha isici ongathanda ukusisebenzisa ukudala isithombe sakho se-3D.
3D Uzimele ngokwezifiso
Uma ungathanda ukungeza Uhlaka lwe-3D esithombeni sakho, khetha uhlaka lwe-3D, bese upheqa ngokusebenzisa izinketho eziningi zozimele ze-3D ngezansi kwesithombe. I-LucidPix inikeza izigaba eziningi ezihlukene zama-Frames we-3D, njenge, Imvelo, Ubumnandi, Indlela Yokuphila, Ukudla, Ukuhamba, njll. Lapha, sikhethe Uhlaka lwe-Basketball engxenyeni entsha ukudala ukudubula okuhle kwe-basketball engena kwi-hoop eceleni kwesithombe wesakhiwo.
Ukususa Uhlaka lwe-3D
Uma uthanda ukuba nesithombe sakho se-3D ngaphandle kohlaka lwe-3D, khona-ke lokhu kungenziwa kalula! Ukusuka ekhasini lasekhaya, skrolela kukhetho le- “3D Photo”. Igalari yakho yezithombe izovela lapho ungakhetha khona noma yisiphi isithombe ukuthi siguqulwe sibe yi-3D futhi lokhu kuzokwenziwa ngaphandle kohlaka lwe-3D. Ngenye indlela, khetha isithonjana sekhamera ukuthatha isithombe sakho se-3D ngaphakathi kweLucidPix.
Unemibuzo eminye? Zizwe ukhululekile ukusithumela ku-Facebook noma ku-Instagram ngemibuzo yohlelo lwakho lokusebenza futhi sizozama konke esingakwenza ukuze sibaphendule!
Ukunyusa ngeLucidPix nokumaketha Imikhiqizo yakho →← Inzuzo Yezithombe ze-3D Inkampani Yakho